Siyaasiga ugu afka dheer Gaarisa oo soo bandhigay dhibaatooyin inbadan uu qarinaayay | TOP NEWS
Siyaasiga ugu afka dheer Gaarisa oo soo bandhigay dhibaatooyin inbadan uu qarinaayay
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 17, 2016 No Comment
Siyaasiga caanka ah ee ree Garissa Farah Maalim ayaa ku eedeeyay dowladda ‘UhuRuto’ in ay gacan bidixeeyaan Muslimiinta Kenya. Macalin ayaa sheegay in maamulka hadda jira ay si weyn u takooraan bulshada Soomaaliyeed, Borana iyo Bajuunta muddo sanado ah, gaar ahaan marka ay timaado waqtiga in la siiyo waraaqaha aqoonsiga dalka iyo kaararka.
Waxa uu sheegay in tiro badan oo ah dhalinyarada Soomaalida ee Kenya waligood ay helin dokumentiyo muhiim ah inkastoo codsadeen dhowr bilood ka hor.
“Xukuumadda Jubilee ee uu hogaaminayo Madaxweyne Uhuru iyo ku xigeenkiisa Ruto ayaa u ula dhaqma Muslimiinta in ay ka daraja hooseeyaan muwaadiniinta kale ee dalka.
Waa maxay sababta dadka Soomaalida , Borana ama Baajuunta sanado inay ku qaadan sharciga? Iyagu ma heli karaan shaqooyin, kuma biiri karaan kulliyadaha ama xataa inay u safraan meel ka baxsan dalka , ayuu ku nuuxnuuxsaday “Maalim .
Arrinta kaararka aqoonsiga dalka ayaa dhibaato weyn ku ah gobolka Waqooyi Bari ayuu carabka ku adkeeyay , iyadoo madaxda siyaasadda ay walaac ka muujiyeen tirada badan ee iska diiwaangelisay xafiisyada socdaalka ee kala duwan deegaanka balse aan weli helin aqoonsigooda ay xaqa u leeyihiin.
Siyaasiga ugu afka dheer Gaarisa oo soo bandhigay dhibaatooyin inbadan uu qarinaayay added by Tifaftiraha Somalida Maanta on November 17, 2016